भूपी शेरचन (घुम्ने मेचमाथि आन्धो मान्छेबाट)
प्रक्रितिप्रेमको सुरिलो भाकामा माटो प्रेमलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको यस कवितामा रास्ट्र प्रतिको चोखो मायालाई जीवन्त पारिएको छ l जुन कविताको मूल भाव हो प्रकृतिको मनोहर उपमाहरू बाट सजिएको यस कवितामा प्रकृति मोह मुखरीत भएको छ भन्न सकिन्छ l व्यक्तिगत रुपमा सुख चाहना र रास्ट्र छोडी हिड्ने नेपालको माया मार्ने व्यक्ति प्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको l यस कवितामा नेपालि धर्तीलाई मानाविकरण गरिएको छ l हर बिहान धर्तिरुपी आमाले सुर्य रुपी छोरो पाएको संधर्ब उल्लेख गर्दै हाम्रो प्रकृतिले नै हामीलाई सधैं उत्साहित प्रेरित गराइराखेको धर्ति जस्तै जहिले पनि सुखी र आन्दित भैरहनुपर्ने रास्ट्रवादी र प्रकृतिवादी चिन्तन कविताको मूल भाव हो ।
भूपी शेरचन (वि. सं। १९९२-२०४६ ) साह्रै सुन्दर र मार्मिक कविता रच्ने कविका रुपमा प्रसिद्व छन् । उनले रचेका कवितासङ्ग्रहहरु हुन् - नायाँ झ्याउरे , निर्झर , घुम्ने मेचमाथि आन्धो मान्छे र भूपी शेरचनका कविता । उनका कवितामा क्रान्तिकारी चेतनाको अभिव्यक्ति पाइन्छ, सामाजिक तथा मानविय कमीकमजोरीप्रति व्यङ्ग्य गरिएको भेटिन्छ अनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने रष्टवादी स्वर सुसेलिएको सुनिन्छ ।
पठन बोध: १.तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् :
हरिया हरिया पहाडका फरिया
हिमालले सधैं ढाड सेकेको हुन्छ
म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश
सधैं मेरो मनले
क)' हरिया हरिया पहाडका फरिया अलिक तल सरेर ' भनेको के हो ?
उत्तर: हरिया पहाडका फरिया अलिक तल सारेर भनेको हिउँ परेको दृश्य हो ।
ख) हिमालले कसरि ढाड सकेको छ ?
उत्तर: हरिया पहाडका फरिया तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले ढाड सकेको छ ।
ग) कवि टाढा रहेर पनि के कुराको सम्झना गरिरहेका छन् ?
उत्तर: कवि टाढा रहेर पनि देशको सम्झना गरिरहेका छन् ।
घ) यस कवितांशमा प्रस्तुत मुख्य विषय के हो ?
उत्तर: यस कविताको प्रस्तुत विषय देश प्रेम र प्रकृति हो ।
ङ) अन्तिम दुई पङ्तिलाई गद्धामा रुपान्तर गर्नुहोस् ।
उत्तर: मेरो मनले सँधै सपनामा पाइला टेको हुन्छ ।
२) तलको तालिका हेर्नुहोस् र कविले आफ्नो देशलाई किन सुन्दर ठानेका छन्, उत्तर लेख्नुहोस् :
उत्तर: भूपि शेरचन (वि.सं. १९९२–२०४६) ले स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका थिए । उनि प्रारम्भमा चर्काे रुपमा प्रगतिवादी चिन्तक, मध्यान्तरमा स्वच्छन्दतावादी, मानवतावादी र अन्त्यतिर शारीरिक अस्वस्ताका कारण केही शिथिल कविता सृजना गर्ने सर्जक मानिन्छन् । उनका कवितामा राजनीकित, सामाजिक, आर्थिक असमानता प्रति ठाडो प्रहार गरेको पाइन्छ । उनी समाजमा निम्नवर्गीय जनताको पीडा, व्यथा र वेदनालाई सशक्त पाराले अभिव्यक्त गर्दछन् ।
भूपि शेरचनको मेरो देश कवितामा, प्राकृतिक दृष्टिले भरिपूर्ण एवम् रमणीय मुलुक हो । यहाँको प्रकृतिमा बसन्त ऋतु आयो भने उसलाई पनि यहीँ बसूँ बसूँ लाग्छ । तुषारो परेका रातमा आलुबखडाका हाँगाहाँगामा कुखुराका चल्लाले बिहानको पाहारिलो घाममा पखेटा फिँजाएर घाम तापेजस्तो रमणीय दृश्य देख्न पाइन्छ । यहाँका बनजंगलमा मृगका बच्चाहरु स्वतन्त्र रुपमा उफ्रँदै खेल्दै गर्छन् । नेपाली प्रकृतिका काखबाट प्रस्फुटित छहराले खोलामा पुग्न भीरबाट छाँगो बनाएर हामफाल्ने गर्छन् । रातमा हिमालचुलीले नेपाली आँगनमा रुपौला घाम पालने नेपाली भूमिको प्रत्येक फाँटामा अविरल गतिमा बहने नदी, पाखा–पर्वतमा छहरा र उच्च शिखरमा लेकको रमणीय दृष्य देख्न पाइन्छ । यहाँका साना नदी पनि तुफानी वेगले बगिरहेका हुन्छन् । यहाँ रातमा पनि घामले उज्यालो फाल्छ र आशले मंगल दीप सजाृँछ । यहाँका पहाडका निधारमा लेक, छातीमा छहरा र काखमा नदी हुन्छन् । अबेला घर फर्कने बटुवालाई प्रत्येक झ्याङबाट झयाउँकीरीले सङ्गीतमय तालमा गिज्याउने र अँधेरी पँधेरीमा पानी लिन जाने प्रत्येक युवतीलाई जुनकीरिले ज्योति फिँजाएर उज्यालो छर्ने गर्छ । यहाँका प्रत्येक गाउँ बस्तीमा कस्तुरीको सुगन्धले हावासँगै बहने गर्छ ।
यस कवितामा कविले नेपाली प्रकृतिको विभिन्न पक्षको सुन्दर ढङ्गले वर्णन गर्नु र राष्ट्रिय भाव प्रकट गर्नु उनको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । यस कवितामा कविले आफ्नो देशको प्रकृतिको मग्धकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । यस्तो सुन्दर, शान्त र रमणीय मुलुकबाट जति नै टाढा बस्नु परेपनि नेपालीका हृदयमा नेपालीको अमिट छाप ताजा भएर बसेको हुन्छ । यसरी प्रकृतिले मनोरम भाव प्रकट गरी कविले प्रस्तुत कवितामा नेपालको सुन्दर चित्र उतारेका छन् ।
१. तलका प्रश्नहरुको छोटो , छरितो उत्तर लेख्नुहोस् :
क) ' मेरो देश ' कवितामा आरुबखदाका फूललाई केसँग दाँजीएको छ ?
उत्तर: मेरो देश कविताका रचयिता भूपी शेरचन (१९९२–२०४६) हुन् । मेरो देश प्रकृतिपरक स्वच्छन्दतावादी भावनामा लेखिएको सुन्दर कविता हो । यस कवितामा कविले आरुबखडाका फूलहरुलाई कुखुराका चल्लासँग तुलना गरेका छन् ।
ख) ' बाह्रै महिना मानिसकागालामा आरुको फूल ' फुलाउनुको तात्पर्य के हो ?
उत्तर: मेरो देश कविताका रचयिता भूपी शेरचन (१९९२–२०४६) हुन् मेरो देश प्रकृतिपरक स्वच्छन्दतावादी भावनामा लेखिएको सुन्दर कविता हो । बाह्रै महिना मानिसका गालामा आरुको फूल फुलाउनुको तात्पर्य हिमाली हावा र त्यसको असरले मानिसका गाला राता हुनु हो ।
ग)' मेरो देश ' कविताको सातौँ अनुच्छेदमा पहाडी भूभागको भौगोलिक सतहको कस्तो चिनारी दिएइएको छ?
उत्तर: मेरो देश कविताका रचयिता भूपी शेरचन (१९९२–२०४६) हुन् मेरो देश प्रकृतिपरक स्वच्छन्दतावादी भावनामा लेखिएको सुन्दर कविता हो । बाह्रै महिना मानिसका गालामा आरुको फूल फुलाउनुको तात्पर्य हिमाली हावा र त्यसको असरले मानिसका गाला राता हुनु हो । मेरो देश कविताको सातौँ अनुच्छेदमा पहाडी भु–भागको भौगोलिक सतहको चिनारी गराउँदा कविले स–साना नदीहरुमा पनि तुफानी समुन्द्रको वेग हुन्छ भनेका छन् ।
घ) वसन्त रितुले घर फर्कने कुरा किन स्वट्टै बिर्सिन्छ ?
उत्तर: मेरो देश कविताका रचयिता भूपी शेरचन (१९९२–२०४६) हुन् मेरो देश प्रकृतिपरक स्वच्छन्दतावादी भावनामा लेखिएको सुन्दर कविता हो । बाह्रै महिना मानिसका गालामा आरुको फूल फुलाउनुको तात्पर्य हिमाली हावा र त्यसको असरले मानिसका गाला राता हुनु हो । नेपाल जस्तो प्रकृतिले सिंगारिएको मुलुकमा बसन्त ऋतुको आगमन भएपछि त्यो सदावहार भएर रहन्छ । त्यसैले बसन्त ऋतुले पनि घर फर्कन स्वाट्टै बिर्सन्छ ।
ङ) प्रत्येक रातमा आकाशले मंङ्गलदीप कसरी सजाउँछ ?
उत्तर: मेरो देश कविताका रचयिता भूपी शेरचन (१९९२–२०४६) हुन् मेरो देश प्रकृतिपरक स्वच्छन्दतावादी भावनामा लेखिएको सुन्दर कविता हो । बाह्रै महिना मानिसका गालामा आरुको फूल फुलाउनुको तात्पर्य हिमाली हावा र त्यसको असरले मानिसका गाला राता हुनु हो । निलगिरी र धवलागिरी एक अर्काको मुख हेरेर चम्कँदा प्रत्येक रातले आकाशमा मंगद दीपले सजाउँछ अर्थात् आकाशमा तारा लाग्छन् ।
२) 'मेरो देश ' कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताका कुन कुन पक्षको बयान गरेका छन् । सुची बनाउनुहोस् ।
यस कवितामा कविले नेपाली प्रकृतिको विभिन्न पक्षको सुन्दर ढङ्गले वर्णन गर्नु र राष्ट्रिय भाव प्रकट गर्नु उनको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । यस कवितामा कविले आफ्नो देशको प्रकृतिको मग्धकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । यस्तो सुन्दर, शान्त र रमणीय मुलुकबाट जति नै टाढा बस्नु परेपनि नेपालीका हृदयमा नेपालीको अमिट छाप ताजा भएर बसेको हुन्छ । यसरी प्रकृतिले मनोरम भाव प्रकट गरी कविले प्रस्तुत कवितामा नेपालको सुन्दर चित्र उतारेका छन्
कविले यस मेरो देश कवितामा नेपाली सुन्दरताको सहज र स्वाभाविक रुपले चित्रण गरेका छन् ।
हिउँ परेको रात,
धुपी र सल्लाहरु रुने,
आरुका फूलहरु फुल्ने,
उफ्री उफ्री खेल्ने मृग,
बाह्रै महिना मानिसका गालामा आरुका फूल फुल्छन् ।
पहराले छहराबाट खोलामा हामफाल्छन् ।
पत्येक पहाडको काखमा नदी हुन्छ ।
जुनकीरिले ज्योति फिजाउँछ ।
शितल हावामा कस्तुरीको सुगन्ध फैलिन्छ ।
३) ' नेपाल अत्यन्त सुन्दर देश हो ' भन्ने विषयमा 'मेरो देश ' कविताका आधारमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।
नेपाल सानो छ तर विश्वको मुटु हो । एसियाको मुटु हो । नेपालको सुन्दरता विश्वविख्यात छ। यहाँ अनगिन्ती नदीनाला, खोला, झरना र ताल तलैया छन् । यो देशको सुन्दरता सृष्टिका संरचक ब्रह्माको कलाकौशलताको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । खोँच, भञ्ज्याङ, भिराला पहाडहरु, हरियाली वनजंगल झर–झर झरना कल कल बग्ने खोला, सुनौला हिमाल, पाखा पर्वत मनमुग्धकारी देख्न पाइने यो नेपालको दृष्य र किसानका दश नङ्ग्री खियाएर उब्जनी गरिएको खेती पनि अत्यन्त आकर्षक देखिन्छ । नेपालको टार वेसी, गाउँ बस्तीमा, सहरमा चारैतिर देखिन विविध संस्कृति, जात जाति भेष भुषा आदि तथा अझ सबैको दिल खिच्न सक्ने मानवीय संरचना कलाकारिता र कलाकौशलता सबैको मानव हृदय तान्न सक्षम देखिन्छ । नेपालका बनजंगलमा फुल्ने मनै हर्ने लालीगुँरास र लालुपाते बुकी फूल र सुनाखरी सयपत्री र मखमली फुलले मानव मन लोभ्याइ रहेको देखिन्छ । सबै किसीमले हेरेर नेपालको मुल्याङ्कन गर्न सकिदैन, सँधै हिउँ परिरहने हिमालदेखि सदाबाहार बनै ढकमक्क भएर फुल्ने फुल, हरियाली बनजंगल नेपाली प्रकृतिका उपहार र नेपालको गहना मानिन्छ ।
वाक्यमा प्रयुक्त नामिकहरुको (नाम, सर्वनाम र विशेषण) क्रियासँग हुने कार्यात्मक सम्बन्धलाई बुझाउने व्याकरणात्मक धारालाई कारक भनिन्छ ।
कारकको शाब्दिक अर्थ कार्य गर्ने हो । नामिक पदको क्रियासँगको भूमिकामूलक सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने कारकलाई छुट्याउन प्रथमादेखि सप्तमीसम्मका विभिन्न विभक्ति चिह्नहरु आएका हुन्छन् । त्यस्ता विभक्ति चिह्नले कारकलाई छुट्याउने महत्वपूर्ण कार्य गर्दछन् । जस्तै : एउटै विभक्तिले कारकलाई सङ्केत गरेको स्थिति
बुबाबाट आज्ञा भयो । कर्ता
म बसबाट आएँ । करण
घरबाट विदा लिएँ । अपादान
नामिक पदमा विभक्तिरहित र सहितको अवस्था देखिन्छ । जस्तै :
सुदीक्षा कथा लेख्छे ।
सुष्मिता गाई चराउँछे ।
श्यामले भाइलाई पिट्छ ।
मैले आमालाई बोलाएँ ।
अ) सरल र तिर्यक् कारक:
कारक सरल र तिर्यक् गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । तिनको चर्चा तल गरिन्छ :
सरल कारक वाक्यमा प्रयोग भएका नामिक पदमा विकास नआई मूल रुपमै रहे भने तिनलाई सरल कारक भनिन्छ ।
नाम सर्वनाम विशेषण
केटो रोयो । ऊ जान्छ । बूढो बस्यो ।
चरो उड्यो । त्यो आयो । सानो पल्टियो ।
माछो मारियो ।
तिर्यक् कारक: वाक्यमा प्रयुक्त नामिक पदमा विभिन्न रुपमा परिवर्तन भई विभक्ति प्रत्य लाग्ने कारकलाई तिर्यक् कारक भनिन्छ ।
आ) कारक: वाक्यमा प्रयसक्त भएका नामिक पदले गर्ने व्याकरणात्मक कार्यका आधारमा कारक निम्नलिखित प्रकारका छन् :
१) कर्ता कारक: कर्ता कारकको अर्थ वाक्यमा प्रयोग भएका नामपदले गर्ने कार्य हो । जस्तै :
म घर जान्छु ।
बुबाबाट आज्ञा भयो ।
२) कर्म कारक: कर्ताले गरेको कार्यव्यापारको असर पर्ने पद कर्म कारक हो । जस्तै
मामाले भान्जालाई बोलाउनु भयो ।
साथीले उसलाई धकेल्यो ।
३) करण कारक: कर्ताले कार्य सम्पादन गर्दा प्रयोग गरेको साधन वा माध्यमलाई करण कारक भनिन्छ । जस्तै :
हात्तीले सूँढले पानी पियो ।
मैले कलमले लेखें ।
४) सम्प्रदान कारक: कर्ताले दिएको वस्तु प्राप्त गर्ने वा लाभकलाई सम्प्रदान कारक भनिन्छ । जस्तै :
काकाले भाइलाई मिठाई दिनुभयो ।
मैले श्रीमतीका निम्ति हार किनिदिएँ ।
५) अपादान कारक: कुनै कुरो छुट्टिने वा भिन्न हुने, समयको आरम्भ हुने, विच्छेद हुने वा अलग हुने स्रोत वा स्थानलाई बुझाउने नामिक पदलार्य अपादान कारक भनिन्छ । जस्तै :
आजबाट म पाटनढोकाबाट जावलाखेलसम्म गएँ ।
रुखबाट पात खस्यो ।
६) सम्बन्ध कारक: कारकको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा क्रियासँग हुन्छ, तर सम्बन्ध कारकले स्वामित्व वा आफ्नोपन बुझाउँछ । जस्तै :
रामको भाइ आयो ।
रामका भाइ र बहिनी आए ।
७) अधिकरण कारक: कुनै व्यक्ति वा वस्तु अडिने आधार स्थललाई अधिकरण कारक भनिन्छ । जस्तै :
अहिले पोखरामा गर्मी बढेको छ ।
छोरो विद्यालयमा बस्छ ।
विभक्तिको प्रयोग र परिचय:
नामिक पदमा जोडिएको वाक्यमा कारकको भूमिका स्पष्ट पार्ने सम्बन्ध तत्वलाई विभक्ति भनिन्छ । यसको स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन । ले, लाई, देखि, बाट, को, का, की आदि प्रत्यय विभक्ति हुन् । विभक्तिले एउटा नामिक पदलाई अर्काेबाट छुट्याएर तीनीहरु बीचको सम्बन्ध देखाउने कार्य गर्दछन् भने अर्काेतिर नामिक पदको क्रियासँगको कारकीय सम्बन्ध देखाउने गर्दछन् । जस्तै:
मुमाबाट आज्ञा भयो । कर्ता कारक
धाराबाट पानी आयो । करण कारक
पोखराबाट आजै आएँ । अपदान कारक
रामले चिमोट्यो । कर्ता कारक
चुच्चाले घोच्यो । करण कारक
भाइलाई बोलाऊ । कर्म कारक
खानलाई अन्न छ । सम्प्रदान कारक
प्रथमा विभक्ति: प्रथमा विभक्तिका चिह्न ‘ले, बाट’ हुने । यसले नामिक पदमा जोडिएको वा नजोडिएर कर्ता कारकलार्य सङ्केत गर्दछ । जस्तै :
रामले भात खायो ।
बुबाबाट आज्ञा हुन्छ ।
द्वितीया विभक्ति: द्वितीय विभक्ति कर्म कारकमा लाग्दछ । यसको सङ्केत चिह्न ‘लाई’ हो । द्वितीय विभक्ति निम्न अवस्थामा लाग्दछ, जस्तै :
म छोरीलाई पढाउँछु ।
मलाई भोक लाग्यो ।
तृतीया विभक्ति: कारण कारकसँग गाँसिने विभक्ति तृतीया विभक्ति हो । तृतीया विभक्तिका चिह्न ‘ले, बाट, द्वारा’ हुन् । यो विभक्ति निम्नअवस्थामा लाग्छ, जस्तै :
म खुकुरीले आलु काट्छु ।
ऊ ज्वरो छटपटायो ।
चतुर्थी विभक्ति: चतुर्थी विभक्तिका चिह्न ‘लाई, लागि, लागि, का निम्ति’ हुन् । यिनले सम्प्रदान कारकलाई संकेत गर्छन् । चतुर्थी विभक्ति निम्नअवस्थामा लाग्छ, जस्तै :
भक्तले भगवान्लाई भेटी दिन्छ ।
लड्नाले उसको खुट्टो भाँचियो ।
षष्ठी विभक्ति: षष्ठी विभक्तिका चिह्नहरु ‘को, का, की, रो, रा, नो, ना, नी हुन् । षष्ठी विभक्तिका चिह्न निम्नअवस्थामा लाग्छन्, जस्तै :
मेरो कलम ।
उसको किताब ।
हिजोको विषय ।
सप्तमी विभक्ति: अधिकरण कारकमा लाग्ने विभक्ति सप्तमी हो । यसका विभक्ति चिह्न ‘मा, माथि’ हुन् । यो विभक्ति निम्नअवस्थामा लाग्छ, जस्तै :
टेबुलमा पुस्तक राख ।
म घरमा छु ।
१. तलका वाक्यमा प्रयोग भएका सरल कारकलाई विभक्ति नामयोगी, बहुबचन, र सम्बोधनका आधारमा तिर्यक् कारकमा बदल्नुहोस् ।
अ) केटो भात खान्छ केटाले भात आयो ।
केटासितै म पनि जान्छु ।
केटाहरु भात खान्छन् ।
ए केटा ! भात खा ।
आ) ऊ डोको भित्र पस्यो उसले डोको बोक्यो ।
उसका अनुसार डोको सानो छ ।
उनीहरु डोका लिएर आए ।
इ) छोरो घर अयो मैले छोरालाई पाठ सिकाउँछु ।
छोरासित खेल्न मज्जा लाग्छ ।
छोराहरु खेल्न निस्किए
ए छोरा ’ तिमी चकचक नगर त !
(ई) ए केटो ! यहाँ आइज केटालाई बोलाऊ ।
केटासि खेल ।
केटाहरु आओ ।
२. ले, मा, लाई, बाट, द्वारा, देखि र को विभक्ति तलका खाली ठाउँमा भरी अनुच्छेद पूरा गर्नुहोस् ।
उत्तर : प्रकृतिले मान्छेको मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ । शहरदेखि परको वनको प्रकृतिमा रम्न पाउँदा सबैमा आनन्द आउँछ । नेपालको पूर्वको र पश्चिमको सिमाना प्रकृतिले घेरिएको छ । हिमालमा झरेका नदीलाई हेर्दा कसको मन रमाउँदैन र ? त्यसैले पनि कविहरुले प्रकृतिको गुणगान गरेका छन् । मनमा आनन्द र हृदयमा शान्त भाव उमार्न सक्ने क्षमता प्रकृतिमा छ । प्रकृतिद्धारा रचित यो धर्तीमा जन्मदेखि यसबाट धेरै पाठ सिक्ने गर्छ ।